Idolophu yaseKuah.Igumbi langoku.Comfort Getaway Shopping - I-Airbnb
Idolophu yaseKuah.Igumbi langoku.Comfort Getaway Shopping
Igumbi lakho lokulala e indlu engasemva sinombuki zindwendwe onguLèéChin 晶
ULèéChin 晶 yi-Superhost
Ibekwe ngokucwangcisiweyo kumbindi wedolophu yaseKuah, eyilelwe ngesitayile ukuthuthuzela kunye namava, kufutshane neendawo zokutyela ezininzi, indawo yokuthenga simahla, ivenkile ekwindawo efanelekileyo kunye neendawo zabakhenkethi. Phantse yonke into ibekwe kumgama wokuhamba. Uyilo lwale mihla lwegumbi luhlaziyiwe kwaye lunikezelwe ukukunika indawo yokuhlala etofotofo nokuba kukuhamba okufutshane okanye indawo yokuhlala eyandisiweyo ilungele usapho oluncinci, isibini, ubhaka onemfihlo enkulu, ekhuselekileyo, enoxolo kunye nelona gumbi liphantsi lelona zinga ongayi kulo. khumbula. Hlala nathi
*Igumbi lethu le-120 sqft elinebhedi enkulukazi kunye negumbi lokuhlambela labucala elinokwamkela iindwendwe ezi-2.
*Imbonakalo yesixeko ukusuka kuMgangatho woku-1.
*Igumbi lethu lihlaziywe lihle linefenitshala kwaye lixhotyiswe ngesifudumezi-moya esipheleleyo samanzi, i-smart TV, i-Wi-Fi yasimahla, isihluzo samanzi ashushu nabandayo, indawo yokupaka ebanzi, izinto zangasese kunye neetawuli zinikiwe.
*Indawo yakho izimele ngokupheleleyo kwaye ayizukwabiwa ngendawo
*Ibhokisi Engundoqo SELF khangela-in / khangela ngaphandle
*Ngena : Emva kwentsimbi yesi-2:00 emva kwemini
*Phuma : 12pm
*Indawo yokubuyisela,Iziko loKutya,iPasaraya kunye noMsebenzi wasimahla kwindawo yokuthenga yeHIG,Al-iksan,Mr DIY, 7 Eleven
*Ibhanki / umatshini weATM
*Ukunika amatikiti,Ikhawuntala yoKhenketho lokuBekisa
Umbuki zindwendwe ngu- LèéChin 晶